MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE ANATOLIA PYRENEES - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee Anatolia Pyrenees
Adhijirka Anatolia / Eeyda Noocyada Isku-dhafan ee Weyn
'Hooska digaagga Anatolia / Pyrenees oo leh mid ka mid ri'diisa Shadow waa shan jir ku jira sawirkan. Waxaan ku nool nahay 16 hektar oo leh labaatan ari, laba jennies, hal faras, sideed eeyo (shan eey waa eyda guriga), hal bisad guri, labo keet, hal tiel iyo digaag aad u tiro badan oo aan la tirin karin. Hooska ayaa shaqeeya habeenkii, maalintiina wuu seexdaa. Haddii qof qalaad ama xayawaan qalaad yimaado albaabka, Hooska ayaa ku jira ilbiriqsi. Isagu aad buu u ilaaliyaa arigiisa haddii aad fursad u siiso inuu ku fiiriyo, wuu kaa tagi doonaa kaligiis umana arko inuu khatar ku yahay arihiisa. Isagu marna iskuma dayin inuu cid qaniino. Waan hubaa inuu weerari doono haddii uu arko khatar.
Pyrenees Anatolia ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Adhijirka reer Anatolia iyo Pyrenees weyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Hadh ee Anatolian / Pyrenees isku qas ey ey
'Hooska iyo eeyaha cusub ee Bear, sidoo kale Anatolian / Pyrenees-eeyadayda oo dhan waa la hagaajiyay ilmaha cusubna waa la hagaajin doonaa markuu weynaado. Bear waa lix toddobaad Daisyna waa shan jir ku jira sawirkan. Bear waa eey ari ilaaliya oo tababar qaadanaya.
'Bob waa 4 jir Pyrenees Anatolian Shepherd isku jira. Waa qof deggan oo deggan guriga maalintii laakiin wuxuu aad u ilaaliyaa idaheenna iyo digaagga habeenkii. '
Bob the Pyrenees / Anatolian Shepherd ey isku jira (Anatolian Pyrenees) oo jira 4 sano
'Tani waa Lucy, Pyrenees-kayga weyn / Anatolian Shepherd isku jir ah markay jiraan 2 sano. Iyadu waa eey aad u fiican oo waardiye ah runtiina way weyn tahay !!! '
'Kani waa Boomer, noo 70-lb., 1-sano jir 1/2 Great Pyrenees iyo 1/2 pup Anatolian. Waxaan u kaxeynay isaga iyo walaalkiis ka yar Apollo (3-bil jir shaybaarka madow) wabiga halkan ku yaal Ft. Leonard Wood markii ugu horreysay ee ay biyaha dhex galaan. Si toos ah ayuu u soo galay oo uu dhex mushaaxayay biyaha macaan daqiiqad kasta. Xitaa wuxuu isku dayay inuu jiifsado meeshuu aad uga qoto dheer yahay ... wuxuu ku socday jidka oo dhan. Waqtigiisii ​​ayuu is qabtay… aad ayuu u qosol badan yahay! '
'Kani waa Boomer, 70-lbkeena, 1-sano jir 1/2 Great Pyrenees iyo 1/2 pup ardayga ayaa la kulmaya walaalkiis yar oo aad u cayaar badan oo xariif ah Apollo, Black lab pup markii ugu horeysay.
Liistada Eyda Adhijirka ah ee ey isku dhafka eyda
buur view curis yaryar oo iib ah
boston terrier yorkie dhallaanka yaryar ee iibka ah iib
Terrier iyo adhijirka Jarmalka isku dhafka ah
alaskan malaamute iyo alwaax yerooyin isku dhafan
Intee ayey leegyihiin mastirayaasha faransiiska
pitbull sawirada isku dane dane weyn